အသားအရေနှင့် အလှအပ - Hello Sayarwon - စာမျက်နှာ 94 အနက်မှ 1
အရေပြားဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်ပါ။ အပြင်ကနေ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပေးထားတာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကို အပူချိန်ထိန်းညှိတာ၊ ရောဂါပိုးတွေ မဝင်အောင် တားဆီးပေးတာ စတဲ့ အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ အရေပြားဆိုတာဘာလဲ၊ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ဒီစာမျက်နှာမှာ လေ့လာလိုက်ပါ။
ကြက်ဟင်းခါးသီး အသားအရေ လှစေသလား ......
ကြက်ဟင်းခါးသီး အသားအရေ လှစေသလား ........ ဘယ်လို ထင်မိလဲ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး ! ကြက်ဟင်းခါးသီးက အခါးဓာတ် ရှိတယ်။ ဆီးချိုသမားတွေ စားပေးသင့်တယ်။ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး များတယ်လို့ သိထားပေမယ့် အသားအရေကိုရော လှစေလားဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ အဖြေ ပြောပြပေးမှာမို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။ ကြက်ဟင်းခါးသီး ဆိုတာ ကြက်ဟင်းခါးသီးကို သိပ္ပံအမည်အရ Momordica charantia လို့ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ အသီးက ရှည်မျောမျော ဖြစ်ပြီး အစိမ်းရောင် ရှိပါတယ်။ အခွံခွာစရာမလိုဘဲ အစေ့ထုတ်ပြီးပဲ ချက်ပြုတ် စားသုံးရုံပါ။ ကြော်စားလို့ ရသလို ဟင်းချက်စားလို့လည်း ရပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ ဖျော်ရည်ဖျော်သောက်တာပါ။ အခွံမှာ အဖုအပိမ့်တွေပါပြီး စိမ်းရွှေရွှေ အနံ့ ရှိပါတယ်။ အရသာကတော့ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ခါးပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံ တော်တော်များများမှာ […]
Hello Sayarwon Panel မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • ခုလေးတင်
ဝက်ခြံတွေ ဘာကြောင့် ကောက်ခါငင်ခါ ထွက်လာကြသလဲ
နည်းစနစ်မှန်မှန် Sheet Mask ကပ်ရင်း အသားအရေ ထိန်းသိမ်းကြမယ်
ဗောက်သီး စားတာ အသားအရေ လှစေသလား
အောင်မဲညို အသားအရေ လှစေသလား
အသားအရေနှင့် အလှအပ ကဏ္ဍများကို ပိုမို သိရှိလိုသည်
အရေပြားကျန်းမာရေးက လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်၊၊ အရေပြားက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြင်ပက ပိုးမွှားတွေ ကူးစက်မခံရအောင် ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ပထမဆုံးခံတပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်၊၊ အရေပြားက ရေဓာတ်ကို ထိန်းထားပေးတဲ့အတွက် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်၊၊ အာရုံကြောတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် အပူအအေးနဲ့ နာကျင်မှုတွေကိုလည်း ခံစားနိုင်ပါတယ်၊၊
ကျန်းမာတဲ့ အရေပြားရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ၊၊
"ကျန်းမာတဲ့ အရေပြားဆိုတာ -အရေပြား မပါးဘဲ ပွန်းပဲ့လွယ်၊ အညိုအမည်းစွဲလွယ်တာမျိုး မရှိပါဘူး၊၊ ဆိုလိုတာက အရေပြားက လုံလောက်တဲ့ အထူရှိပြီး အလယ်လွှာမှာ ကော်လဂျင်နဲ့ အီလက်စတင် elastin တွေ ရှိနေတာပါ၊၊ -အရေပြားက စိုစိုပြေပြေ ရှိပါတယ်၊၊ ခြောက်သွေ့ပြီး ကြမ်းတမ်းတာမျိုး မရှိပါဘူး၊၊ ဆိုလိုတာက အရေပြားမှာ ရေဓာတ်လုံလောက်စွာရှိနေပြီး အဆီလွှာကလည်း ကျန်းမာနေပါတယ်၊၊ - ပုံမှန်ခံစားချက်တွေဖြစ်တဲ့ ပူတာအေးတာကို အပူအအေး ကောင်းကောင်းသိပါတယ်၊၊ ဆိုလိုတာက တခြားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ယားတာ၊ ကျိန်းစပ်တာ၊ ပူစပ်တာတွေကို ခံစားရတာာမျိုး မရှိပါဘူး၊၊"
အသားအရေကြည်လင်ဖို့ ဘာတွေ လုပ်ပေးရမလဲ၊၊
"အသားအရေကြည်လင်ဖို့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက်တွေကတော့ -အပြင်မသွားခင်မှာ အနည်းဆုံး SPF 30ပါတဲ့ နေလောင်ကာခရင်မ်လိမ်းထားပါ၊၊ နေလောက်ကာခရင်မ်က နေရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးတာကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေ အိုမင်းတာကိုလည်း နှေးစေပါတယ်၊၊ အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်၊၊ အိမ်ထဲမှာ နေပေမယ့် နေရောင်ဝင်နိုင်တဲ့ ပြတင်းပေါက်နားမှာ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် နေလောင်ကာခရင်မ်လိမ်းဖို့ လိုပါတယ်၊၊ -ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ၊၊ ဆေးလိပ်က အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို မြန်စေပါတယ်၊၊ အနာကျက်တာကို နှေးစေတဲ့အပြင် အရေပြားရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ဆိုရီယေးစစ်လို ရောဂါတွေကို ပိုဆိုးစေပါတယ်၊၊ -မျက်နှာကို ပုံမှန်သန့်စင်ပါ၊၊ အိပ်ရာထထချင်း၊ အိပ်ရာမဝင်ခင်နဲ့ ချွေးထွက်များစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပြီးတိုင်းမှာ မျက်နှာသစ်ပါ၊၊ မိမိအသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ မျက်နှာသန့်စင်ဆေး အပျော့စားကို သုံးပါ၊၊ -အသားအရေ မခြောက်သွေ့ပါစေနဲ့၊၊ ရေများများသောက်ပါ၊၊ အစိုဓာတ်ထိန်းကရင်မ် လိမ်းပါ၊၊ -စိတ်ဖိစီး မခံပါနဲ့၊၊ စိတ်ဖိစီးတဲ့အခါ အဆီပြန်စေပြီး ဝက်ခြံတွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်၊၊ နှင်းခူလို အရေပြားပြသနာတွေကိုလည်း ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်၊၊"
ဝက်ခြံဆိုတာ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြသနာဖြစ်ပြီး မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ကျောနဲ့ လက်မောင်းတွေမှာ အဖုလေးတွေအနေနဲ့ တွေ့ရပါတယ်၊၊ မွေးညင်းပေါက်လေးတွေကို အဆီတွေ၊ ဆဲလ်သေတွေနဲ့ ပိတ်တဲ့အခါ ဝက်ခြံဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်၊၊
အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲ၊၊
"အရေပြားကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်၊၊ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေကတော့ -ဝက်ခြံ -ဆံပင်ကျွတ်တာ -နှင်းခူ -ချွေးပေါက်ပိတ် ပြည်တည်နာ -ဆိုရီယေးစစ် -မျက်နှာနီမြန်းနာ -အရေပြားကျုံ့တဲ့ရောဂါ -ခရုသင်း"
အသားအရေနှင့် အလှအပ နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
တမာရွက် ကပေးတဲ့ အသားအရေ လှပမှု
တမာရွက် လို့ ပြောလိုက်ရင် တမာချဉ်ကို အရင် ပြေးမြင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အချည်တည်လို့ တို့စားလေ့ရှိတဲ့ တမာရွက်လေးက ကျန်းမာရေးအတွက်တင် ထောက်ကူပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသားအရေလေးကိုလည်း လှပ ကျန်းမာစေပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုမျိုး အသားအရေ လှပစေဖို့ ထောက်ကူပေးလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ တမာရွက် ဆိုတာ တမာရွက် ဆိုတာ တမာပင်ရဲ့ အရွက်ပါ။ တမာပင်က အပူပိုင်းအမြဲစိမ်းအပင်တစ်မျိုးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်များစွာကတည်းက အာရှဒေသကနိုင်ငံတွေမှာဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ တမာက တစ်ပင်လုံးလိုလိုဆေးဖက်ဝင်တာပါ။ တမာရွက်နဲ့ အခြားအပင်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းရောဂါတွေအတွက် အသုံးပြုလို့ရသလို ကူးစက်ရောဂါတွေကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးအသုံးပြုလို့ရတာကတော့ အင်းဆက်တွေနဲ့ ပိုးမွှားတွေကို နှိမ်နင်းတိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အရာအဖြစ်ပါ။ တမာကအရိပ်ရရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးဖက်လည်းဝင်ပါသေးတယ်။ အသားအရေအတွက်ရော ဘယ်လိုများ ထောက်ကူပေးမလဲဆိုတာ အတူတူ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ တမာရွက်မှာ ဘာတွေပါလဲ ...... ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့ လူသိများတဲ့ တမာရွက်မှာ အမျှင်ဓာတ် အဆီဓာတ် ကယ်လ်ဆီယမ် သံဓာတ် […]
ဟင်းနုနွယ် ကပေးတဲ့ အသားအရေ လှပခြင်း
ဟင်းနုနွယ် လို့ ပြောလိုက်ရင် ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမလိုအောင် လူတိုင်း မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဟင်းနုနွယ်က စားလို့ ကောင်းသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူး များပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဟင်းနုနွယ် စားပေးတာက ကျန်းမာရေးအတွက်တင် မဟုတ်ဘဲ အသားအရေကို ဘယ်လို ထောက်ကူပေးလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဟင်းနုနွယ်မှာ ဘာတွေ ပါလဲ။ အစိမ်းရောင် ရင့်ရင့်နဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကလေးမှာ ဗီတာမင် K အမျှင်ဓာတ် phosphorus သီရာမင်း ကယ်လ်လိုရီ ပရိုတင်း ကယ်လ်ဆီယမ် သံဓာတ် မဂ္ဂနီဆီယမ် ပိုတက်ဆီယမ် ဗီတာမင် A ဗီတာမင် C သံဓာတ် ဖောလိတ်တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဟင်းနုနွယ် ကပေးတဲ့ အသားအရေ လှပခြင်း အစိမ်းရင့်ရောင် ရှိတဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်က နည်းနည်းလေး ခါးသက်သက် ဖြစ်ပေမယ့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ကြွယ်ဝစွာ […]
ဝက်ခြံကြောင့် အသားတွေ ယားနေတဲ့အခါ
ဝက်ခြံက လူတိုင်းလိုလို ခံစားနေရတဲ့ အရေပြား ပြဿနာပါ။ ဆယ်ကျော်သက်တိုင်း လိုလို ရှောင်လွဲလို့ မရတဲ့​ အရေပြားပြဿနာပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်မဝင်ခင်မှာ ဝက်ခြံ ဖြစ်တာကို အများဆုံး ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ အချို့က လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော် ဝင်ပြီးချိန်မှာ သက်သာသွားတတ်ကြပေမယ့် အချို့ကတော့ အရွယ်ရောက်တဲ့ အချိန်ထိ ဝက်ခြံတွေ ဆက်ပေါက်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဝက်ခြံထွက်တဲ့အခါ အရေပြားပေါ်က ဂလင်းလေးတွေ၊ မွှေးညှင်းပေါက်လေးတွေ ရောင်ရမ်းတာက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ လက္ခဏာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဝက်ခြံကြောင့် အသားတွေ ယားနေတဲ့အခါ ဘယ်လို သက်သာအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ ......... ဝက်ခြံ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက တစ်ခုမက ရှိနေပါတယ်။ အဆီတွေ အများကြီး ထွက်နေတာ အဆီပါတဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ မိတ်ကပ်တွေ အများကြီး […]
နွေပူပူမှာ ကြည်ကြည်လင်လင် အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်စေဖို့
နွေပူပူ ချွေးထွက်ထွက်မှာ အလှပျက်မှာ အသားမည်းမှာ စိတ်ပူနေပြီလား။ နွေကလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပူလာပါပြီ။ အသားအရေကလည်း နေရောင်ဒဏ်ကို အတော်လေး ခံရပါတယ်။ ဒီတော့ အသားဖြူဖြူလေးနဲ့ လှချင်တဲ့ လေဒီလေးတွေလည်း အတော် စိတ်ညစ်နေပြီပေါ့။ ဒီတော့ နွေပူပူမှာ ကြည်ကြည်လင်လင် အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ဘယ်လိုများ လုပ်ရမလဲဆိုပြီး တွေးနေပြီလား..... ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်။ နေရောင်ကြောင့် အသားအရေ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်က ဗီတာမင် D ရရှိစေတယ်ဆိုပေမယ့် ဒါက မနက်ခင်း နေရောင်ခြည်ပါ။ ၉ နာရီနောက်ပိုင်းမှာ ကျရောက်တဲ့ နေရောင်က အပူပြင်းသလို အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေလည်း တော်တော်များများ ပါဝင်နေပါတယ်။ နေရောင်ကြောင့် အရေပြား ထိခိုက်တာ အသားမည်းတာ တင်းတိပ်ဖြစ်တာ မှဲ့ခြောက် ဖြစ်တာ ဝက်ခြံဖြစ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နွေပူပူမှာ […]
နွေရာသီမှာ ထွက်လာမယ့် မိတ်တွေ သက်သာစေဖို့
မကြာခင်မှာ ပူပြင်းမှုတွေကို ယူဆောင်လာမယ့် နွေကို ရောက်လာတော့မှာပါ။ ဒီလို နွေရောက်လာတဲ့အခါ အရေပြားပြဿနာ အမျိုးစုံကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ခံစားရတဲ့ အရေပြား ပြဿနာတွေထဲကမှ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြား ပြဿနာ တစ်ခုကတော့ မိတ်ထွက်တာပါ။ ဒီလို နွေရာသီမှာ မိတ်တွေ ထွက်လာတဲ့အခါ သက်သာစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာကို အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။ မိတ်ဆိုတာ မိတ်ဆိုတာ အရေပြားပေါ်မှာ ထွက်တတ်တဲ့ ယားစပ်စပ် အဖုအပိမ့်လေးတွေပါ။ ကုတ်မိရင် တော်တော်လေး စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ ခံရခက်ပါတယ်။ မိတ်က ပြင်းထန်တဲ့ အရေပြား ပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် နေရထိုင်ရတာတော့ အတော်လေး မသက်မသာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိတ်တွေ ဘယ်နားမှာ ပေါက်တတ်လဲ မိတ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာ အနှံ့မှာ ပေါက်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောကုန်း […]
ဝက်ခြံကပ်ခွာ တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံထွက်လာပြီဆိုရင် အဝိုင်းလေးတွေ ကပ်ထားကြတာကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ တချို့ဆို အသားရောင်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းမို့လို့ သိပ်တောင် မသိသာပါဘူး။ ဒါလေးတွေကို ဝက်ခြံကပ်ခွာ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံကပ်ခွာက တကယ်ပဲ ဝက်ခြံသက်သာစေတာလား။ ဘယ်လိုမျိုး အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံကပ်ခွာ ဆိုတာ ဝက်ခြံကပ်ခွာဆိုတာ တကယ်တော့ ပလာစတာတစ်မျိုးပါပဲ။ သူ့ထဲမှာ Hydrocolloid လို့ခေါ်တဲ့ Gelatinလို ပစ္စည်းပါဝင်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကပ်ခွာမှာ ဝက်ခြံအတွက် ပိုထိရောက်အောင်ဆိုပြီး salicylic acid လိုမျိုးတွေပါ ထည့်သွင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဝက်ခြံကပ်ခွာက ဝက်ခြံကို ဘယ်လိုမျိုး သက်သာစေတာလဲ။ ဝက်ခြံထဲက အဆံတွေကို ထွက်သွားစေတယ်။ ဝက်ခြံကပ်ခွာက ဝက်ခြံပတ်လည်မှာ ရှိနေတဲ့ အရည်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ အဆီတွေကို စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ စုပ်ယူထားတဲ့ အညစ်အကြေးတွေက ကပ်ခွာမှာ ရှိနေတဲ့ Gelatin […]
ခေါင်းလည်း ပုံမှန်လျှော်တယ်။ ဆံပင်ကိုလည်း ဆီလိမ်းတယ်။ Hair coat ထည့်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေကို သေချာလည်း ဖြီးသင်ပါရက်နဲ့ ဆံပင်က အမြဲလိုလို ကျွတ်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ သူတွေ ရှိလား ....... ဒါဆိုရင်တော့ ဆံပင်ကျွတ် နေရတဲ့ အဖြေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်နေရတာ ခေါင်းသေချာ မလျှော်လို့လား ...... ဆံပင်က ပုံမှန်လည်း ကျွတ်တတ်ပေမယ့် တစ်နေ့ကို အများကြီး ကျွတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆံပင်က အရမ်းကျွတ်နေပြီလို့ ပြောရပါမယ်။ ဆံပင်ကျွတ်ရခြင်းက ခေါင်းမလျှော်တာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည် မကောင်းတာကြောင့် ကျွတ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် စားသောက်မှုကြောင့်လည်း ဆံပင်ကျွတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဆံပင်ကို သေချာ ဂရုစိုက်နေရက်နဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းလေးနဲ့ ဆံပင်မကျွတ်ရအောင် ဘာတွေကို သတိထား ရှောင်ကြဉ်စားသောက်ဖို့ လိုမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ သတိ! ဒါတွေမစားပါနဲ့။ ဆံပင်ကျွတ် […]
ဆံပင်ကျွတ်တာက နေ့တိုင်းကြုံရတဲ့ ကိစ္စပါ။ နေ့စဉ်လူတစ်ယောက်က ဆံပင် အပင်၁၀၀လောက် ကျွတ်ပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန်ပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဆံပင်တွေ ပါးလောက်တဲ့ထိ အများကြီး ကျွတ်နေရင် ပြဿနာပါ။ ပိုဆိုးတာက ဆံပင်အကွက်လိုက် ကျွတ်တာပါ။ ဒါဆို Alopecia areata လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုအကွက်လိုက် ကျွတ်တာက ပိုဆိုးပါတယ်။ ပိုပြီးသိသာနေတဲ့အတွက် လူနာက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုပါ ခံစားရပါတယ်။ Alopecia areata ဆိုတာ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အမွေးကျွတ်တာပါ။ ဆံပင်အပြင်၊ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေးတွေပါ ကျွတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်ကျွတ်တာကပဲ အဖြစ်များပါတယ်။ သာမန်ကျွတ်တာနဲ့ မတူဘဲ အကွက်လိုက် ကျွတ်တာပါ။ ဦးရေပြားမှာ ဟိုနားတစ်ကွက်၊ ဒီနားတစ်ကွက်နဲ့ အကွက်လိုက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ Alopecia areata က ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ။ ဒီလိုမျိုး အကွက်လိုက် ကျွတ်ရတာက […]
ဝက်ခြံမညှစ်မိအောင် ထိန်းရတာက တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ကိုယ့်မျက်နှာမှာ သိသာနေတဲ့ အဖုလေးတွေက ညှစ်ပစ်ချင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ညှစ်လိုက်လို့ မတော်တဆ ပိုးဝင်သွားရင် ဝက်ခြံပိုဆိုးလာမှာ၊ အမာရွတ်တွေ ကျန်ခဲ့မှာကလည်း ကြောက်ရပါသေးတယ်။ ညှစ်ချင်ပေမယ့် မညှစ်မိအောင် အတင်းထိန်းချုပ်ထားရတာက ဝက်ခြံသမားတွေ မကြာခဏ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုပါပဲ။ ဝက်ခြံမညှစ်မိအောင် ဘယ်လိုထိန်းကြမလဲ ဒီတော့ ဝက်ခြံမညှစ်မိအောင် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို လှည့်စားဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဝက်ခြံက စညှစ်မိရင် နောက်အလုံးတွေပါ ညှစ်မိနိုင်တာကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ထိန်းပြီး ဝက်ခြံပျောက်တဲ့အထိ ငြိမ်ငြိမ်နေသင့်ပါတယ်။ ဝက်ခြံမညှစ်မိအောင် ထိန်းဖို့ ဒီနည်းလမ်းတွေကို လုပ်ကြည့်ရအောင်။ ရက်သတ်မှတ်ထားပါ။ ဥပမာ ဒီရက်ကစလို့ ၃ရက်အတွင်း ငါဝက်ခြံမညှစ်ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ပါ။ တစ်ခုရှိတာက ရက်ကို ဝေးဝေးမှာ ထားလေလေ၊ စိတ်မရှည်ဘဲ ညှစ်မိဖို့ များလေလေပါ။ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်ရောက်လို့ ဝက်ခြံမသက်သာသေးဘူးဆိုရင်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဝက်ခြံသေးသွားတာပဲ။ ရောင်တာလျော့သွားတာပဲဆိုပြီး […]
အသားအရေနှင့် အလှအပ ကျွမ်းကျင်သူ